Weriyeyaal lagu xir-xiray magaalada Garowe
Buluugleey Jun 24, 2005
Booliska magaalada Garoowe ayaa 48 saac in ka badan ku haya xabsiga Laba weriye oo kala ahaa Tifaftirihii wargeyska Shacab iyo weriye kale, waxaana looo cuskaday in ay soo saareen nuqulo ka dhan ah maamulka Puntland. Ilaa hadda ma jiraan warar xaqiijinaya in suxuufiyaantaas la soo daayey.
Ma aha markii ugu horeysay gudaha Soomaaliya lagu xir-xio ama la jirdilo amba dhegta dhiiga loo daro saxafi gudanaya waajibaadkiisa. arrintaasna waa wax khilaafsan sharciga saxaafada ee caalamka u dhigan. wararka ayaa sheegaya in weriyayaasha an la ogeyn xaaladooda waxa ay ku sugantahay.
Hadaba dhawaanahan waxaa soo ifbaxayey dhibaatooyinka lagu hayo saxaafadda xorta ah iyo wariyayaasha madaxa banaan, iyo weliba kuwa u shaqeeya Hay'ado saxaafadeed, waxaana had iyo goor maleeshida maamulka Puntland u geystaan gef weyn iyo caburis ee weedaarsan xeerk asaxaafada caalamiga.